မိန်းကလေးတွေ ကိုယ် ချစ် လည်း မရှာ နဲ့ သူချစ် လည်း မရှာနဲ့ လူစိတ် ရှိတဲ့ လူ ကိုပဲ ရှာကြပါဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း” (ဖြစ်ရပ်မှန်) – Zartiman
နောက်ဆုံး ကိုယ်ဝန် ၇ လ နဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း လောကကြီးကထွက်သွားခဲ့ရပြီ စိတ်ရောဂါကြောင့်ကျွန်မဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်ဘာဘူး မိန်းကလေးတွေနဲ့ သတိပေးချင်လို့. ကိုယ့်ချစ်လဲမရှာ သူ့အချစ်လဲမရှာနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲရှာပါ။ကျွန်မသူငယ်ချင်း က နှလုံးရောဂါ ရှိ တယ် ကလေး ယူမရဘူး လို့ ဆရာဝန်မှာ ထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ်။ (4. 12.2019) သူကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ်။
ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး။ ဆရာဝန်လေကလေးယူရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မှာထားတယ် ။ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ်။ သူယောကျာ်း ပျော်မယ်လို့ထင်ထား တယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက် ချဖို့ပြောလာတယ်။ နင်ပဲလိုချင်တယ် ငါရတော့မှ ဖျက်ချဖို့ဆိုတာ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရပြီးတယ် နောက်ပိုင်း သူယောကျာ်း သူ့ကိုနည်းနည်းလေး မှ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး အိမ်မှာမနေဘူး။
သူကနှလုံးရောဂါရှိတယ်လေ စိတ်ဓာတ်ကျတယ် စားမဝင်အိပ်မပျော်တော့ဘူး။ကျွန်မက အားပေးစကားပြောတယ်။ သူ့နဲ့အဖော်နေပေး တယ် နောက်တစ်နေ့မှာ သူယောကျာ်း အမေအိမ်ပြန်သွားတယ် သူကဆံပင်ဖျောင့်ချင်တယ် လမ်းမလျှောက်တလျှောက်နိုင်တဲ့ ကျွန်မ အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီနေ့က ကျွန်မနားအရမ်းနာနေတယ်နောက်နေ့မှသွားလို့မရဘူးလား သူကဒီနေ့ပဲဖျောင့်ချင်တယ် ကျွန်မက သူအမိန့်အတိုင်းပဲ ခေါ်ဇာမြို့မှာ ဆံပင်သွားဖျောင့်တယ်။
ဆံပင်ဖျောင့်နေတဲ့အချိန်က သူ့ယောက်ကျား ဖုန်းဝင်လာတယ်။ကျွန်မပဲ ကိုင်တယ် သူဆံပင်ဖျောင့်နေတယ်လို့ခနနေပြီးတော့မယ် သူ့ ယောက်ကျားက ဒေါသထွက်နေတဲ့အသံ သူ့ကိုဖုန်းပေးပြောလို့ ကျွန်မကဖုန်းပေးလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေပြောနေလဲ ကျွန်မ မသိဘူး သေချာတာတစ်ခုက ရန်ဖြစ်နေတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကျွန်မနဲ့လိုက်တာမကြိုက်ဘူး။ကျွန်မမသိအောင် သူဖုံးကွယ် ထားတယ် ကျွန်မစိတ်ဆိုးသွားမှာကို သူကြောက်တယ်။သူ့ယောက်ကျားက အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့လို့ ပြောလာတယ်။
ဆံပင်ဖျောင့်တာမပြီးသေးဘူးပြီးရင်ပြန်လာမယ် သူ့ယောက်ကျားကမရဘူးအခုချက်ချင်းပြန်လာတဲ့သူယောက်ကျားလိုက်လာတယ်။ လမ်း မှာဆုံတယ် အရှိန်းနဲ့မောင်းလာတယ် ကျွန်မဆိုင်ကယ်အရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်တယ် နှလုံးရောဂါ မရှိတဲ့ ကျွန်မတောင် တော်တော်လန့်သွား တယ်။ကျွန်မသူငယ်ချင်း ဘယ်လောက်တောင်လန့်သွားလဲမသိဘူး ဆိုင်ကယ် ရပ်ပြီး လမ်းမှာပဲ သူ့ယောက်ကျား သူ့ကိုလည်ပင်ညှစ်တယ် သူကလေးတစ်ယောက်လိုအော်ငိုတယ်။ကျွန်မကသူ့ယောက်ကျာ်းကို တောင်းပန်တယ်။
သူ့ကိုဒီလိုမရိုက်ပါနဲ့ သူရောဂါ ရှိတယ် ထပ်ခါထပ်ခါတောင်းပန်လဲ သူ့ယောက်ကျားသူ့ကိုလည်ပင်ညှစ်ထားတုန်းပဲ လမ်းသွားလာလူတွေ လဲတစ်ယောက်မှမကူညီကြဘူး ဘယ်သူမှလေ ဝင်မကူညီရဲဘူး။ကျွန်မဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ ကျွန်မလေ မျက်ရည်ကျတယ် ဟိုဘက် ကြည့်လိုက် ဒီဘက်ကြည့်လိုက် ကျွန်မ ခြံစောင့်သမားဦးလေးတစ်ယောက်တွေ့သွားတယ် အဲဒီဦးလေးကို ကျွန်မအကူညီတောင်းတယ်။ ဦးလေးက ခြေထောက်မကောင်းဘူး လမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်။
ဦးလေးကဝင်ကူညီပေးတယ် ကျွန်မတို့ အိမ်ပြန်သွားတယ် တစ်လမ်းလုံး သူငိုလာတယ် သူ့ယောက်ကျားလေ ကျွန်မ ဆိုင်ကယ်နောက် လိုက်လာတယ် သူအိမ်အထိ ကျွန်မလိုက်ပို့တယ် သူအိမ်ရောက်ပြီးဆိုတော့ ကျွန်မလေ သူများလင်မယားကိစ္စ ဝင်မပါဘူးဆိုပြီး အိမ်ပြန် သွားတယ်။အဲဒီညက သူ့ယောက်ကျား အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး သူ့ကို ရိုက်တယ်လို့ ရပ်ကွက်ကလူတွေ ကျွန်မနဲ့လာပြောပြတယ် ကျွန်မအရမ်း ဒေါသထွက်တယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်း နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်။ကျွန်မနဲ့လိုက်လို့ သူရိုက်တာတဲ့ သူအမေပြောပြတယ်။
ကျွန်မစိတ်ဆိုးသွားတယ် သူအိမ်မသွားတော့ဘူး သူကမနေနိုင်ဘူး။ ကျွန်မအိမ်မ လာရင် ကျွန်မဆီလာတယ် စဉ်းစားကြည့်စမ်းကျွန်မတို့ ငယ်ပေါင်းတွေလေ မတွေ့ပဲနေနိုင်မလား ကိုယ်ဝန်ကလေ တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီး လာပြီးကျန်းမာရေးလေးမကောင်းဘူးဆိုတော့ အလုပ်လုပ် ဖို့ပြောလာတယ်။ပိုက်ဆံစုဖို့ပြောတယ် သူ့ယောကျာ်းက နင်အဲလောက်ထိ ပိုက်ဆံလိုနေရင် ဖာသည်မ သွားလုပ်လိုက်ပါလားတဲ့။ စဉ်းစား ကြည့်စမ်း ကိုယ့်ကို အဲလိုပြောရင် စိတ်မတိုဘူးလား တိုမှာပေါ့နော်။အဲအချိန်သူလေပြန်ပြောလာတယ်။
နင်ညီမလေး သုံးယောက်ရှိတယ် ပေးလုပ်လိုက်ပါလား အဲလိုပြောတော့ သူ့ယောကျားပါးရိုက်တယ် (10 PM) ကျော်နေပြီး ကျွန်မသူငယ် ချင်းအမေ အိပ်ပျော်နေပြီး သူယောက်ကျားသူ့ကို ပါးရိုက်တာ ဘယ်လောက်နာလဲတော့ မသိဘူး ကျွန်မသူငယ်ချင်းအမေနိုးလာတယ် အိမ် ပေါ်မောင်းထုတ်တယ်။သူ့ယောက်ကျားပြန်သွားတယ်။နောက်သုံးလေ ရက်ကြာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကွာရှင်းတယ် ပြီးတော့ ကျွန်မ ဆီရောက်လာတယ် သုံးလေးရက်တောင်ကြာတယ်။ သူ့မျက်နှာရောခြေ လက်တွေရောမဲနေသေးတယ်။
ကွာရှင်းပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ယောက်ကျား ရည်းစား ရသွားပြီးလေ သူကိုယ်ဝန်လေ ၄ လကျော်သွားတယ် နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်။ ကျန်းမာရေး ကလဲမကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူယောက်ကျား ရည်းစားရသွားပြီး ပိုပြီးခံစားရတယ် သူကဆေးခန်းမကြာမကြာသွားပြရတယ် သူ့ယောက်ကျားလျော်ကြေးမပေးဘူး။ ဆေးခန်းတစ်ခါပြရင် တစ်ခါလာရှင်းပေးမယ် ဆေးခန်းပြဘယ်လောက်ကုန်လဲ ဆေးခပဲ ပေးတယ် ကားခ ဘာညာဘာမပေးဘူး အချိုရည်တစ်ဘူးတောင် မသောက်ရဘူး ။
ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်စမ်း ဆရာဝန်တွေက သူ့ကိုဂရုစိုက်ပေးဖို့်မှာတယ်။မကောင်းတဲ့စကားတွေ သူ့အရှေ့ မှာ မပြောပါနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဆေးခန်းလာပြပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ် ကိုယ်ဝန်က ကြီးလာလေ လူက အသက်ရှူမရ လာလေပဲ အုန်းရည်သောက်ချင်တယ် ကိုယ်ယောက်ကျားမရှိတော့ ဝယ်သောက်ရတယ်။မိန်းကလေးတွေ ကိုယ် ချစ် လည်း မရှာ နဲ့ သူချစ် လည်း မရှာနဲ့ လူစိတ် ရှိတဲ့ လူ ကိုပဲ ရှာကြပါဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း”ကို ပြောပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောကျဆုံး ကိုယျဝနျ ၇ လ နဲ့ ကြှနျမသူငယျခငျြး လောကကွီးကထှကျသှားခဲ့ရပွီ စိတျရောဂါကွောငျ့ကြှနျမဘယျသူမှ အပွဈမတငျဘာဘူး မိနျးကလေးတှနေဲ့ သတိပေးခငျြလို့. ကိုယျ့ခဈြလဲမရှာ သူ့အခဈြလဲမရှာနဲ့ လူစိတျရှိတဲ့လူကိုပဲရှာပါ။ကြှနျမသူငယျခငျြး က နှလုံးရောဂါ ရှိ တယျ ကလေး ယူမရဘူး လို့ ဆရာဝနျမှာ ထားတယျ သူ့ယောကျကြားက ကလေးလိုခငျြတယျ ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပွောတယျ။ (4. 12.2019) သူကိုယျဝနျရှိနပွေီး ကြှနျမနဲ့ပွောပွလာတယျ ကြှနျမကမယုံဘူးမယုံဘူး နငျငါရှမေ့ာဆီးစဈပွဆိုပွီး သူကစဈပွပေးတယျ။
ကြှနျမကပြျောလပြေျောတယျ စိတျလပေူတယျ သူက ကနျြးမာရေးမကောငျးဘူး။ ဆရာဝနျလကေလေးယူရငျ အသကျအန်တရာယျရှိတယျလို့ မှာထားတယျ ။ကြှနျမစိတျပူနမေိတယျ ကိုယျဝနျရှိနတေဲ့အကွောငျးသူယောကျြားနဲ့ သူပွောပွတယျ။ သူယောကျြား ပြျောမယျလို့ထငျထား တယျ ဘယျဟုတျမလဲ ဖကျြ ခဖြို့ပွောလာတယျ။ နငျပဲလိုခငျြတယျ ငါရတော့မှ ဖကျြခဖြို့ဆိုတာ မလုပျပေးနိုငျဘူးတဲ့ ကိုယျဝနျရပွီးတယျ နောကျပိုငျး သူယောကျြား သူ့ကိုနညျးနညျးလေး မှ ဂရုမစိုကျတော့ဘူး အိမျမှာမနဘေူး။
သူကနှလုံးရောဂါရှိတယျလေ စိတျဓာတျကတြယျ စားမဝငျအိပျမပြျောတော့ဘူး။ကြှနျမက အားပေးစကားပွောတယျ။ သူ့နဲ့အဖျောနပေေး တယျ နောကျတဈနမှေ့ာ သူယောကျြား အမအေိမျပွနျသှားတယျ သူကဆံပငျဖြောငျ့ခငျြတယျ လမျးမလြှောကျတလြှောကျနိုငျတဲ့ ကြှနျမ အိမျကိုရောကျလာတယျ။အဲဒီနကေ့ ကြှနျမနားအရမျးနာနတေယျနောကျနမှေ့သှားလို့မရဘူးလား သူကဒီနပေဲ့ဖြောငျ့ခငျြတယျ ကြှနျမက သူအမိနျ့အတိုငျးပဲ ချေါဇာမွို့မှာ ဆံပငျသှားဖြောငျ့တယျ။
ဆံပငျဖြောငျ့နတေဲ့အခြိနျက သူ့ယောကျကြား ဖုနျးဝငျလာတယျ။ကြှနျမပဲ ကိုငျတယျ သူဆံပငျဖြောငျ့နတေယျလို့ခနနပွေီးတော့မယျ သူ့ ယောကျကြားက ဒေါသထှကျနတေဲ့အသံ သူ့ကိုဖုနျးပေးပွောလို့ ကြှနျမကဖုနျးပေးလိုကျတယျ။သူတို့နှဈယောကျဘာတှပွေောနလေဲ ကြှနျမ မသိဘူး သခြောတာတဈခုက ရနျဖွဈနတေယျ သူ့ယောကျကြားက ကြှနျမနဲ့လိုကျတာမကွိုကျဘူး။ကြှနျမမသိအောငျ သူဖုံးကှယျ ထားတယျ ကြှနျမစိတျဆိုးသှားမှာကို သူကွောကျတယျ။သူ့ယောကျကြားက အခုခကျြခငျြးပွနျလာခဲ့လို့ ပွောလာတယျ။
ဆံပငျဖြောငျ့တာမပွီးသေးဘူးပွီးရငျပွနျလာမယျ သူ့ယောကျကြားကမရဘူးအခုခကျြခငျြးပွနျလာတဲ့သူယောကျကြားလိုကျလာတယျ။ လမျး မှာဆုံတယျ အရှိနျးနဲ့မောငျးလာတယျ ကြှနျမဆိုငျကယျအရှမှေ့ာ ပိတျရပျတယျ နှလုံးရောဂါ မရှိတဲ့ ကြှနျမတောငျ တျောတျောလနျ့သှား တယျ။ကြှနျမသူငယျခငျြး ဘယျလောကျတောငျလနျ့သှားလဲမသိဘူး ဆိုငျကယျ ရပျပွီး လမျးမှာပဲ သူ့ယောကျကြား သူ့ကိုလညျပငျညှဈတယျ သူကလေးတဈယောကျလိုအျောငိုတယျ။ကြှနျမကသူ့ယောကျကျြားကို တောငျးပနျတယျ။
သူ့ကိုဒီလိုမရိုကျပါနဲ့ သူရောဂါ ရှိတယျ ထပျခါထပျခါတောငျးပနျလဲ သူ့ယောကျကြားသူ့ကိုလညျပငျညှဈထားတုနျးပဲ လမျးသှားလာလူတှေ လဲတဈယောကျမှမကူညီကွဘူး ဘယျသူမှလေ ဝငျမကူညီရဲဘူး။ကြှနျမဘာမှ မတတျနိုငျတော့ ကြှနျမလေ မကျြရညျကတြယျ ဟိုဘကျ ကွညျ့လိုကျ ဒီဘကျကွညျ့လိုကျ ကြှနျမ ခွံစောငျ့သမားဦးလေးတဈယောကျတှသှေ့ားတယျ အဲဒီဦးလေးကို ကြှနျမအကူညီတောငျးတယျ။ ဦးလေးက ခွထေောကျမကောငျးဘူး လမျးလြှောကျထှကျလာတယျ။
ဦးလေးကဝငျကူညီပေးတယျ ကြှနျမတို့ အိမျပွနျသှားတယျ တဈလမျးလုံး သူငိုလာတယျ သူ့ယောကျကြားလေ ကြှနျမ ဆိုငျကယျနောကျ လိုကျလာတယျ သူအိမျအထိ ကြှနျမလိုကျပို့တယျ သူအိမျရောကျပွီးဆိုတော့ ကြှနျမလေ သူမြားလငျမယားကိစ်စ ဝငျမပါဘူးဆိုပွီး အိမျပွနျ သှားတယျ။အဲဒီညက သူ့ယောကျကြား အခနျးတံခါးပိတျပွီး သူ့ကို ရိုကျတယျလို့ ရပျကှကျကလူတှေ ကြှနျမနဲ့လာပွောပွတယျ ကြှနျမအရမျး ဒေါသထှကျတယျ။ ကြှနျမသူငယျခငျြး နတေို့ငျးစိတျဆငျးရဲနတေယျ။ကြှနျမနဲ့လိုကျလို့ သူရိုကျတာတဲ့ သူအမပွေောပွတယျ။
ကြှနျမစိတျဆိုးသှားတယျ သူအိမျမသှားတော့ဘူး သူကမနနေိုငျဘူး။ ကြှနျမအိမျမ လာရငျ ကြှနျမဆီလာတယျ စဉျးစားကွညျ့စမျးကြှနျမတို့ ငယျပေါငျးတှလေေ မတှပေဲ့နနေိုငျမလား ကိုယျဝနျကလေ တဈဖွညျးဖွညျးကွီး လာပွီးကနျြးမာရေးလေးမကောငျးဘူးဆိုတော့ အလုပျလုပျ ဖို့ပွောလာတယျ။ပိုကျဆံစုဖို့ပွောတယျ သူ့ယောကျြားက နငျအဲလောကျထိ ပိုကျဆံလိုနရေငျ ဖာသညျမ သှားလုပျလိုကျပါလားတဲ့။ စဉျးစား ကွညျ့စမျး ကိုယျ့ကို အဲလိုပွောရငျ စိတျမတိုဘူးလား တိုမှာပေါ့နျော။အဲအခြိနျသူလပွေနျပွောလာတယျ။
နငျညီမလေး သုံးယောကျရှိတယျ ပေးလုပျလိုကျပါလား အဲလိုပွောတော့ သူ့ယောကြားပါးရိုကျတယျ (10 PM) ကြျောနပွေီး ကြှနျမသူငယျ ခငျြးအမေ အိပျပြျောနပွေီး သူယောကျကြားသူ့ကို ပါးရိုကျတာ ဘယျလောကျနာလဲတော့ မသိဘူး ကြှနျမသူငယျခငျြးအမနေိုးလာတယျ အိမျ ပျေါမောငျးထုတျတယျ။သူ့ယောကျကြားပွနျသှားတယျ။နောကျသုံးလေ ရကျကွာတော့ သူတို့နှဈယောကျကှာရှငျးတယျ ပွီးတော့ ကြှနျမ ဆီရောကျလာတယျ သုံးလေးရကျတောငျကွာတယျ။ သူ့မကျြနှာရောခွေ လကျတှရေောမဲနသေေးတယျ။
ကှာရှငျးပွီးနောကျပိုငျး သူ့ယောကျကြား ရညျးစား ရသှားပွီးလေ သူကိုယျဝနျလေ ၄ လကြျောသှားတယျ နတေို့ငျးစိတျဆငျးရဲနတေယျ။ ကနျြးမာရေး ကလဲမကောငျးရဲ့သားနဲ့ သူယောကျကြား ရညျးစားရသှားပွီး ပိုပွီးခံစားရတယျ သူကဆေးခနျးမကွာမကွာသှားပွရတယျ သူ့ယောကျကြားလြျောကွေးမပေးဘူး။ ဆေးခနျးတဈခါပွရငျ တဈခါလာရှငျးပေးမယျ ဆေးခနျးပွဘယျလောကျကုနျလဲ ဆေးခပဲ ပေးတယျ ကားခ ဘာညာဘာမပေးဘူး အခြိုရညျတဈဘူးတောငျ မသောကျရဘူး ။
ဘယျလောကျဝမျးနညျးဖို့ကောငျးလဲ စဉျးစားကွညျ့စမျး ဆရာဝနျတှကေ သူ့ကိုဂရုစိုကျပေးဖိျု့မှာတယျ။မကောငျးတဲ့စကားတှေ သူ့အရှေ့ မှာ မပွောပါနဲ့ တဈခုခုဖွဈရငျဆေးခနျးလာပွပါ။ ဒါပမေဲ့ သူက နတေို့ငျးစိတျဆငျးရဲနတေယျ ကိုယျဝနျက ကွီးလာလေ လူက အသကျရှူမရ လာလပေဲ အုနျးရညျသောကျခငျြတယျ ကိုယျယောကျကြားမရှိတော့ ဝယျသောကျရတယျ။မိနျးကလေးတှေ ကိုယျ ခဈြ လညျး မရှာ နဲ့ သူခဈြ လညျး မရှာနဲ့ လူစိတျ ရှိတဲ့ လူ ကိုပဲ ရှာကွပါဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး”ကို ပွောပွခွငျး ဖွဈပါတယျ။